अमेरिकामा कोरोनाबाट ४ जना नेपालीको एकैदिन निधन – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/अमेरिकामा कोरोनाबाट ४ जना नेपालीको एकैदिन निधन
अमेरिकामा कोरोनाबाट ४ जना नेपालीको एकैदिन निधन
काठमाडौ । अमेरिकामा रहेका नेपाली स्तब्ध भएका छन् । अमेरिकामा उच्च गतिमा फैलिएको कोरोना भाइरस त्यहाँ रहेका नेपालीका लागि झनै दुखद बनेर आएको छ । त्यहाँ एकैदिन ४ जना लोकप्रिय नेपालीको निधन भएको छ । अमेरिकी नेपाली समाजका अत्यन्त लोकप्रिय व्यक्तित्व वरिष्ठ समाजसेवी अजय छोचुनजी, ब्यवसायी थोक्मे बिष्ट, सोनाम लामा, निमा टेम्बा शेर्पाको निधन भएको जनाइएको छ । अजय छोचुनजी अमेरिकी नेपाली समाजका अत्यन्त लोकप्रिय व्यक्तित्व वरिष्ठ समाजसेवी हुन् । यसैगरी झण्डै २० बर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका थोक्मे बिष्टको सन्नीसाइडमा बस्दै आएको अपार्टमेन्टमा मृत्यु भएको छ । बिष्ट अपर मुस्ताङको लोमान्थाङका हुन् ।
विष्टको हिजो विहान ९ बजे घरमै निधन भएको र बेलुका ६ बजेतिर प्रहरी र मेडिकल टिम आएर श व लगेको पारिवारिक श्रोतले जानकारी दिएको छ । मुस्तांग किदुगको पूर्व अध्यक्ष नोर्बु बिष्टका अनुशार सुरुमा टाउको दुख्ने र स्वास फेर्न गाह्रो हुने समस्या भएपछि बिष्ट सीटीएमडीमा उपचारका लागि गएका थिए । त्यसपछि उनलाई घरमै आराम गरेर बस्न भनिएको थियो । कहिले राम्रो हुने कहिले स्थीति एकदम नराम्रो हुने गरेकोमा अस्ती बेलुका खाना समेत खान नसकेको जनाइएको छ ।
सीटीएमडीले घरमै बस्न भनेपछि बिष्ट माउन्ट साइनाई अस्पतालमा समेत गएका थिए । अस्पतालले एक्सरे गरेपछि फोक्सोमा समस्या रहेको बताएको थियो । तर अस्पतालले भर्ना लिन नमानी घरमै आराम गर्न भनेको र केहीदिनमा रिपोर्ट दिने बताएको थियो । रिपोर्ट नआउँदै बिष्टको निधन भएको छ । बिष्ट मुस्ताङका राजाका समेत नजिकका आफन्त हुन् । यसैगरी सोनाम लामा, निमा टेम्बा शेर्पापनि अमेरिकाका चर्चित व्यक्ति हुन् । उनीहरु आफ्नै व्यसाय तथा प्रतिष्ठित काम गर्ने नेपालीमा पर्दथे ।
प्राध्यापक, पर्यटन व्यवसायी र समाजसेवी आदरणीय अजय छोचुन दाई को दुखद देहावसान ! हार्दिक श्रद्धांजली
सँगीता भाउजु,अभि र परिवारमा समवेदना !! एकै दिन थोक्मे बिष्ट ,सोनाम लामा, निमा टेम्बा शेर्पा गुमाएको खबरले सँसार स्तव्ध छ । सबैमा हार्दिक श्रद्दान्जली ! परिवारमा हार्दिक समवेदना !!
सपनाको सहर यो एक, दुई, तीन लाश गन्दैछ गरीव त्यो पहाड़ी गाउँ नै सुरक्षित र खास भन्दैछ कहिल्यै नसुत्ने शहरमा सिटामोलको प्यास नबुझाउदै
रक्त, चन्दन, तुलशी बेगर नै जा स्वर्ग वास भन्दैछ।
भारतमा बढ्दो छ कोरोना कहर : एकैदिन ६ सय भन्दा बढिको मृत्यु, मृतकको संख्या १६ हजार नाघ्यो